PaveAI: Qof Ugu Dambeyn Jawaabo Ka Helay Google Analytics! | Martech Zone
Isniin, February 27, 2017 Isniin, February 27, 2017 Douglas Karr
Muddo sanado ah waxaan la dhibtoonaynay macaamiisha iyo xirfadleyda labadaba qaadashada go'aano liita oo ku saleysan Analytics. Waxaa jira dhowr cilladood, gaar ahaan leh Google Analytics, in dadku badanaa aysan ka warqabin:
Gaadiid been abuur ah - Analytics taraafikada kuma jiraan booqashooyinka ay sameeyeen bots. Dhibaatadu waxay tahay inay jiraan malaayiin bots halkaas oo qarinaya aqoonsigooda sida bot. Waxay booqdaan hal jeer daqiiqad kooban, iyagoo si dabiici ah u kordhinaya heerarkaaga soo kabashada isla markaana yareynaya waqtigaaga goobta. Adigoon si fiican u shaandheynin, waxaad qaadan kartaa go'aano liita.
Ghost Traffic / Gudbinta spam - waxaa jira nacasyo banaanka jooga oo kuwaaga doonaya Analytics pixel oo kor u qaad taraafikadaada adoo muujinaya inay iyagu yihiin goob tixraac adiga kuu ah. Xitaa iskama celin kartid maadaama aysan booqan goobtaada gabi ahaanba! Mar labaad, inaadan kala shaandheyn booqashooyinkaas adiga ayaa saameyn ku yeelan kara go'aannadaada.
Gadiidka aan lagu talo gelin - ka waran dadka soo booqda ee ulakaca u yimid goobtaada, laakiin ka tagay maxaa yeelay waxay raadinayeen wax kale? Waxaan leenahay macmiil mar uun aad ugu sarreeyay lambarka wicitaanka ee raadiyaha maxalliga ah. Mar kasta oo uu tartan ka socdo raadiyaha, taraafikadooda ayaa sii yaraanayay. Waxaan ka saarnay bogga oo aan codsanay in laga saaro makiinadaha raadinta - laakiin maahan kahor inta aysan waxyeello u geysan kooxdii suuqgeynta ee halkaas ka heli weyday.
Marka sidee loo shaandheeyaa oo loo qaybiyaa kanaga Analytics xogta ilaa qayb la isticmaali karo, tirakoob ahaan ansax ah oo awood kuu siineysa inaad si sax ah u falanqeyso akhlaaqda martida?
PaveAI: Fahamka Falanqaynta otomaatiga ah
Soo dhawow, PaveAI. PaveAI waxay kuu oggolaaneysaa inaad dhexgaliso Google Analytics, Google Search Console, Google Adwords, Facebook Ads, Instagram Ads (adoo adeegsanaya Maareeyaha Ganacsiga Facebook) iyo Xayeysiinta Twitter. Mashruucoodu wuxuu markaa adeegsadaa algorithm AI iyo noocyo kala duwan oo tirakoobyo ah oo ku saleysan xogtaada suuq geynta si dib loogu raadiyo dhammaan xogta aad u baahan tahay si aad go'aan adag u gaarto. Warbixinnada xitaa waxay bixiyaan qaybo iyo suurtagalnimadooda inay noqdaan hoggaamiye ama macmiil.
Waxaan soo qaadanay nidaamyo dhowr ah oo Google Analytics u rogay Ingiriis casri ah oo soo bandhignay warbixino aad u wanaagsan. Waxaanan ku mashquulnay tan oo ah agab dashboard ah oo meesha yaal… laakiin midkoodna ma siinaynin macaamiisheenna guud-mariska ay u baahan yihiin mana na siinayaan fikradaha aan u baahan nahay si aan wax ugu hagaajino. PaveAI labadaba wuu sameeyaa! Xaqiiqda ah inay iyaguna ka warbixin doonaan adiga Analytics yoolalka iyo mudada kalfadhigu sidoo kale waa mid qiimo leh. Waa tan warbixin tusaale ah:
Warbixinta Muunada PaveAI - Jiilka Hogaaminta
PaveAI horeyba u shaqeyneysey xogta in ka badan 400 milyan oo booqdeyaal ah bil kasta. Waxay si toos ah uga saaraan spam tixraaca waxayna keenaan xogta ku qoritaanka joornaalkaaga sidoo kale.
PaveAI: Faa'iidooyinka iyo Isticmaalka Kiisaska
Markay qiimeynayaan, PaveAI ayaa ka caawisay macaamiisha inay gaaraan celcelis ahaan 37% kororka jiilka hogaanka ama dakhliga saddex bilood kadib, iyo iskucelcelis Haynta 2x hay'adaha muddo hal sano ah. Ma aha in la xuso waqtiga ay ka caawinayaan suuqleyda inay keydiyaan falanqaynta iyo ururinta warbixinnada nidaamyada kala fog.
Isu qor 14-Maalmood Bilaash ah Tijaabada PaveAI
Qiimaha waa mid si macquul ah loo awoodi karo marka loo eego qiimaha xogta la bixiyay. PaveAI sidoo kale waxay leedahay ruqsad siinta shirkadaha, shatiyeynta wakaaladaha, iyo xarfaha cad.
Tags: aiAnalyticssirdoonka macmalfalanqaynta emaylkaAnalytics googlejiilka ledpaveaisaadaalinfalanqaynta saadaalintaitimaalka